Akụkọ - 2021 China West Int'l Plant Wepụ Ihe Ngosipụta Ngwaahịa
2021 China West Int'l Plant Wepụ Ihe Ngosipụta Ngwaahịa
Hibbọchị ngosi: July 28-30, 2021
Ebe: Xi'an International Conference Center (Chanba)
2021 "China West Int'l Plant Wepụtara ọgwụ ngwaọrụ nke ihe ngosi" ga-abụ ihe omume dị egwu dị elu na ndị na-azụ ahịa ụlọ na nke mba na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ.
Ihe ngosi a ga-eme na Xi 'an, China na July 28, 2021. Ndị ọbịa na ndị ngosi gosipụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọkachamara ịzụta 50,000 iji nyere ndị ngosi aka ịgbasa ọwa azụmahịa. Mpaghara ngosi a na - eme ka ndi na - emeputa ihe di elu sitere na ihe eweputara ihe ndi ozo, ihe ndi ogwu, ihe ndi ozo, anumanu na ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, na ihe ndi ozo.
Western China nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-emepụta ihe dị elu, ma mepụta usoro mmepụta na ahịa ngọngọ zuru ezu. Ntọala ụlọ ọrụ siri ike na-adọta ndị na-azụ ahịa si China na n'akụkụ ụwa niile ịgbakọ ebe a kwa afọ. Ihe ngosi a ga - ejikọ aka mepụta oriri na nkwenye mba ofesi maka ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ!
N'ịdabere na netwọk siri ike nke mba dị iche iche nke òtù ihe ngosi mba ụwa, kọmitii na-ahazi ga-enyere ndị na-eme ihe ngosi mba na ụlọ aka ka ha nwee ike nyochaa ahịa ndị China. Ngosipụta a ga-arụ ọrụ dị mkpa n'oge ọrịa na-efe efe, na-egosi ihe ngwọta na-aga nke ọma na usoro mmepe n'ọdịnihu na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ ga-elekwasịkwa anya na mgbanwe nke mmepụta, lọjistik, ire ahịa na usoro nkwukọrịta na ụlọ ọrụ ahụ, na-enyere aka weghachite ike ahịa ma guzobe azụmaahịa ọhụrụ.